Syria oo codsatay shir-madaxeed carbeed - BBC Somali
Syria oo codsatay shir-madaxeed carbeed
13 Nofembar 2011
Image caption Taageerayaasha Bashaar Assad
Dawladda Syria ayaa codsatay shir-madaxeed carbeed oo degdeg ah oo lagaga hadlo xiisadaha Syria.
Dhinaca kale waxa laga oogey magaalooyinka dalkaasi muddaharaadyo lagu taageerayo madaxweyne Bashaar al Assad, laguna cambaaraynay ururka Jaamicadda Carabta.
Syria waxay haatan ku baaqday in ururka Jaamicadda Carabtu uu soo diro guddi wasiirro ah oo xaqiiqo-raadis ah, hubiyana hirgelinta heshiisyadii Syria la gashay Jaamicadda Carabta.
Baaqani Syria waxa uu ka danbeeyey shirkii wasiirrada Jaamicada Carabta oo laalay xubinnimadii Syria ilaa iyo inta dawladda Syria ay ka hirgelinayso shuruudihii dib-u-heshiisiinta iyo wada hadalka ee jaamicaddu soo jeedisay. Waxa kale oo Jaamicaddu ugu baaqday ciidamada Syria inay ka waantoobaan inay xoog ku isticmaalaa muddaharaadyada ka soo horjeeda xukuumadda Bashaar al Assad.
Syria waxay cambaaraysay go'aankan Jaamicada Carabta, waxayna ku tilmaantay mid u adeegaya danaha reer Galbeedka.
Dhinaca kale, muddaharaadaas laga dhigay magaalooyinka Syria qaarkood, oo lagu taageerayey madaxweyne Bashaar al Assad, ayaa lagu weeraray safaaradihii ajnebiga ahaa qaarkoodoo oo ay ka mid yihiin kuwii Turkiga, Saudi Arabia, iyo Qatar. Dawladda Turkigu waxay ugu baaqday Syria i la dhawro nabadgelyada safaaradaha
Mucaaradku waxay sheegeen in ciidamada nabadgelyadu ay ilaa afar qof ku dileen magaalada Xama.
Masar waxay ku baaqday in aan la ogolaan faragelin debadeed, laakiin waxay kula talisay dawladda Syria inay fuliso ballanqaadyadii dib-u-habaynta siyaasadeed ee ay la gashay Jaamicadda Carabta.